“Xaalada Manchester United way i xanuun jineysaa maalin kasta” – Marcus Rashford – Gool FM
“Xaalada Manchester United way i xanuun jineysaa maalin kasta” – Marcus Rashford
(England) 01 Luulyo 2019. Xiddiga kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa shaaca ka qaaday xanuunka uu maanta dareemayo sababa la xiriira xaalada adag ay ku sugan tahay Red Devils.
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa maanta ku dhawaaqday inay qandaraas cusub ka saxiixatay ciyaaryahankeeda Marcus Rashford, kaasoo garoonka Old Traffrod ku sii hayn doona illaa iyo sanadka 2023-ka, waxaana laacibka reer England heshiiskan cusub uu mushaar ahaan ku qaadan doonaa todobaadkii adduun dhan £250,000.
Hadaba Marcus Rashford ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay qaabka ay Manchester United kaga dhameysatay xilli ciyaareedkii hore, iyo inay ku fashilantay inay u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo aadan.
Rashford ayaa kaddib marka uu maanta saxiixay heshiiska cusub uu ku sii joogi doono garoonka Old Traffrod ilaa iyo 2023-ka ayaa wuxuu yiri:
“Waa dareen weyn, waxayna ii tahay sharaf inaan heshiis cusub u saxiixo kooxda Manchester United”.
“Waxaan ahay mid ka mid ah taageerayaasha, guuldarada ciyaarta inbadan ayey i saameeneysaa sababtoo ah waxaan ahay taageere”.
“Waa arin xanuun badan, in maalin kasta aan aragno meesha aan maanta joogno marka lala barbardhigo waagii hore”.
“Ma doonayo inaan arko wax ka badan Manchester United oo markale ku guuleysaneysa horyaalka Premier League iyo sidoo kale Champions League, Qof kasta halkan joogo wuu u qalmaa inaan siino wax badan, ma ahan oo kaliya taageerayaasha, balse xitaa kooxda”.
RASMI: Kooxda Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa Adrien Rabiot
Sababta ugu weyn uu ku seegay Copa America 2019, soo laabashada Zidane ee Real Madrid & dhowr arrimood muhiim ah uu ka hadlay Marcelo